news2dago | Septambra 2008
[Ankapobeny ] 25 Septambra, 2008 06:52
Tonga Soa Fanilo
Ity no lahatsoratra voalohany nosoratako ho an'i Fanilo zanako tongasoa teraka ny alatsinainy t@ 9h50 tao @ pavillon sainte fleur! Salama tsara ny reniny sy ny zanany na tsy maintsy nandalo fandidina aza ny reniny noho ny antony ara-pasalamana. Ny fanampin'anarana fanilo Haingotiana no nosafidinay mivady ho fiantso azy! faly ny tena ary tena misantatra izany oe mitaiza izany!
Efa nanomboka ny alahady no nakaty zao aho no tsy natory firy @ alina! ary mety tsy havaky ny hafatra apetrakareo aho zao satria mbola any @ hopitaly izahay h@ izao fa nikarakara kopia aty @ firaisana ho dia mizara ny hafalina eto @ tontolo ny blaogy aloha. LOL ! mando vola kely aty @ cyber tsy hita e!
izay aloha fa mandra-panoratra indray! dia misaotra mialoha @ firarintsoa valiko eo daholo rehefa tafody any an-trano izahay mandany fotoana lavalava aho!
[ (12) Hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ] | [Rohy maharitra]
[Ankapobeny ] 20 Septambra, 2008 09:10
Tiako ianao ry teniko!
Tsara levenana ny maty, voalevina omaly tokoa ny nofo mangatsikan'i Rado. Notron'ireo olona marobe toy ny olom-panjakana ny mpanankato ny mpikabary ary ny olotsotra marobe, tsy tambo isaina, izay nanamorona ny lalana niala teny Ankorondrano ka hatreny Faravohitra ary nifarana teny Anjanahary. Izany rehetra izany dia tao anatiny kopakopa tanana sy tehaka hatrany, miaraka @ ireo hira nosoratan'ity mpanakanto lasa nody ity.
Etsy an-danin'izay dia toa lasa zezika nampitsiry indray ny fitiavan'ny malagasy ny tenindrazany ity fahalasan'i Rado ity. Tsy hisy intsony mantsy ny sahy hanamavo ny olona mampiasa ny teny malagasy. Hita taratra t@ fitaizana nameon'i Rado ho an'ireo zanany izany. Nanaitra ahy tokoa mantsy ilay fanadaharana tao @ tvm izay nanoritroritra ny androm-piainany. Voalaza t@ izany ary fa ny zanany rehetra dia tsy mba miresaka @ teny vahiny rehefa miresaka. Anatra ho antsika taranaka aty afara izany, aiza ho aiza moa isika @ fitiavana azy ity. Ekeko mihitsy oe raha te hamolaka teny hafa dia tsy maintsy mampiasa azy aloha. Kanefa kosa mila mahay mandanja lanja ny tsirairay manoloana izany.
Kenda ihany koa aho raha namaky ny fikarohana nataona mpikaroka sy manampahaizana iray milaza fa @ taona 2050 any hoany hono dia tsy hisy intsony izany teny gasy mangarahara izany. Koa manoloana izany indrindra enga anie ka mba ho diso izany fikarohana vita izany, ialako tsiny @ ilay mpikaroka, no mampitsiry ny fanatenana ato anatiko oe misy antony ny nandaozan'i Rado antsika iny. Tsy maintsy hisy mantsy manomboka eto ny sehatra misy ny sangan'asany izay hahazo toerana bebe kokoa. Ary hanaitra ny ambompon'ny ankizy sy ny taranaka hifandimby ny hitondra izany fanilo izany.
Vaovao hafa kosa no hotanterina manaraka dia niovaoka ny didim-pitsarana ary voaeloka higadra asa anterivozona 10 taona sazy miatra i Rija Ramino zanak'i pasitera Ramino paul, izany moa dia eloka efa vitany tany @ taona 2004 tany ho any. Tena feno habibina tokoa raha ny filazan'ny gazety ny namonony ilay olona. Tena mafy ny mahazo ity Pasitera rainy ity.
Ankizy maro kosa no nitsindroka sy nihinanana yaourt à boire efa simba, ary voalaza moa fa maty mihitsy ilay ankizy 5 taona nihinana ity yaourt ity. jereo eto ny adininy misimisy momba izay.
[ (14) Hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ] | [Rohy maharitra]
[Ankapobeny ] 19 Septambra, 2008 08:31
[Ankapobeny ] 18 Septambra, 2008 07:59
Zaza be tangolaza!
Milaza ny maro ankehitriny fa lasa resa-jaza ny ady ny cua sy ny governemanta. Ary tena marina izany satria mitovy tsy misy valaka @ ireny zaza be tatibolana manafitohana sy maha te hikapoka ireny. Vao misy zavatra kely mantsy dia manao valan-dresaka foana ireo mpikabana ao @ kabinetra ny kaominina. Maninona moa raha mitady vahaolana aloha vao mitatitra ny vaovao @ vahoaka. Fa tsy manao izao fanao ankehitriny izao.
Voalaza mantsy fa tsy nahazo solika ny CUA, raha tena nozohina ifotony anefa dia ny galana mihitsy no nanapa-kevitra hampiantona ny famatsina solika ireo tsy mpandoa vola. Tsy anavahana io na iza na iza ka ao anatiny ny kaominina fa lasa aiza indray ary ny vola sa dia ho lazaina indray oe ao anatiny ilay trosa h@ 1980 io ka tsy ho efainay intsony fa efa anjaran'ny fanjakana foibe ny mandoa izany.
Izay ny @ iny fa hivadika vaovao hafa mihitsy aho. Mampalahelo mantsy ny mahita ireto mponina etsy @ lalana digue iny fa nototofana ny ampahany @ tanimbary manamorina iny toerana iny. Voalaza moa fa natao amboletra izao fakana ny tanimbary izao. Vidin'ny fanjakana 10.000 Ar mantsy ny 1m toradroa ho an'ireo manana taratasy aradalana ary 5.000 Ariary kosa ho an'ireo tsy manana. Mahagaga ihany moa izao toe-javatra izao ary mandeha be ny resaka momba azy ity. Betsimitatatra moa no anisany mampiavaka an'Antananarivo satria sady mahavokatra no mamonjy ny mponina @ todradrano.
Anio no hiala ao an-tranony eny Ivato ny nofo mangatsika n'i Rado ary ho eny @ kianja mitafo eny Ankorondrano mba ho fiarahan'ny vahoaka miory @ fianankavina. Tsy dia tena mazava loatra moa izay tena marina @ ity fiandrasana ity eo ny milaza fa eny @ lapan'ny fanatanjahatena eny Mahamasina ny vaovao henoko farany anefa dia oe etsy Ankorondrano ka ho hita eo ihany izany rahariva oe aiza marina?
Tokony hamonjy ny fivorina tsy ara-potoana any @ firenena mikambana any amerika kosa ny Filoha malagasy kanefa noho izao nahafatesan'i Rado izao dia mety mbola hiova ny fandaharam-potonany. Marihina mantsy fa tena nandray anjara feno t@ fametrahana izao fitondrana izao i Rado ary tena nampietana ny tonon-kalo novetsoiny t@ izany fotoana izany "Tsy maintsy mipoaka ny sarom-bilany".
[Ankapobeny ] 17 Septambra, 2008 07:45
Henin-kaja ny maty ary omem-boninahitra ny velona
Mbola mitana ny sain'ny maro ny nadaozan'i Rado ny malagasy mpiray tanindrazana aminy. Nahavita be tokoa izy teo @ fanandratana avo ny teny malagasy ary nataony rehareha tokoa izany. rariny loatra raha niondrika sy nitsapa alahelo ny fianankavina ny Filoha ny repoblika Marc Ravalomanana omaly hariva t@ enina ora. Ary niara nipetraka t@ fianankavina moa izy avy eo ary tsy niala teny raha tsy efa t@ 7 ora.
Samy maneho ny lahatsoratra momba azy avokoa moa ireo gazety miseho isan'andro rehetra ary ity ny matoan-dahatsoratra sedra mba tsikaritro: "saro-dimbiasana" hoy i taratra izay tena nanitikitika ny saiko tokoa. Dia tena nivalona tokoa moa izany ny asa soratra nataony sy ny fitandroana ny teny malagasy. Ankehitriny mantsy dia mba mikasa hemerina izany @ toerana misy azy ny mpitondra kanefa toa lalaovin'ny mpanao politika. Batina ery ny malagasy tsy hampiasa ny teniny lazaina hatrany fa mihemotra.
Saika takona daholo aloha ny vaovao hafa hatreto fa io ihany no tena mibahana ny toerana na izany aza misy ihany mba atolotro anereo toy ny fiakaran'ny vola malagasy raha sandaina @ $ sy ny € mbola ho tanteriko eto ihany ny vokatr'izany eo @ ireo orinasa afakaba izay tsy mijery afatsy ny tombotsoany manokana. Eo koa ny disadisa misy eo @ cua sy ny governemanta izay mitohy @ tsy fahazoana ny cua solika. Izay oharin'ireo mpanara-baovao toy ny zaza be tatibolana moa ny Cua @ izy ity.
Alaivo eto ny hira ho fatsiarovana an'i Rado